ချစ်သူ့နှုတ်ခမ်းမှ ချစ်သူတိုင်းအား ကြိုဆိုနေပါ၏၊ ချစ်သူတိုင်း ...... ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုများလဲ ပြုပါရစေ...။ ယခုတွေ့မြင်ရသော ကျွန်ှုပ်၏ ချစ်သူနှုတ်ခမ်းမှ အရာများကား ... အခမ်းနားဆုံး မဟုတ်ခဲ့တောင်လာလည်သူဧည့်သည်တိုင်းအတွက်.... စိတ်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေနိုင်ရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ် .. ။ စိတ် ... ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေနိုင်ဖို့လဲ......အမြဲကြိုးစားလျက်ပါလို့ဝန်ခံရင်း အကယ်၍များ မိတ်ဆွေတို့သည် ဤဆိုဒ်တွင်တစ်ခုခုပေးပို့ချင်ပါက... gothicrockdevil@gmail.com နှင့် greenpridelaw@gmail.com ... တို့သို့ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုချက်များအား .... စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါကြောင်း.........................။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်တွင်ဖြော်ပသောအရာများမှာ ကျွန်တော်တတ်လို့မဟုတ်သလို ကျွန်တော်သိလို့လဲမဟုတ်ပါ တစ်ချို့သည်ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ရေးထားခြင်းဖြစ်သလို အချို့သောအရာများသည် အခြားဆိုဒ် များမှတစ်ဆင့် ကူးယူဖြော်ပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုကူးယူဖော်ပြထားသောဆိုဒ်လိပ်စာများအား အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်မထည့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် ထိုဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များမှ နားလည်ခွင့်လွှတ်စေချင်ကြောင်း ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။လေးစားစွာဖြင့် ချစ်သူ့နှုတ်ခမ်း(Admin)
မောင်လှမျိုး (ချင်းချောင်းခြံ)၏ ၀တ္ထုစာအုပ်များးးးးးးးးးးးး
ဆရာ မောင်လှမျိုး (ချင်းချောင်းခြံ) ရဲ့ ဝတ္တုလေးတွေကို ရသလောက်စုစည်း
ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒေါင်းလော့ချပြီး သိမ်းထားချင်သူတွေအတွက် ဒေါင်းလော့
လင့်လေးတွေ တစ်ခါထဲ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ ဆရာရဲ့စာအုပ်တွေက ရှာရတာနဲနဲခက်
တော့ သိပ်အများကြီးတင်မပေးနိုင်တာတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီမှာပဲ ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင်
စာအုပ်အမည်လေးကို ကလစ်ပြီးဖတ်နိုင်သလို ဒေါင်းချင်တဲ့သူတွေကလဲ ဒေါင်းလော့
ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို ကလစ်ပြီးဒေါင်းပေါ့နော်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွင်ကြပါစေ....ဗျာ။
(၁) အချစ်သီဆိုရာ သီချင်း
(၂) ထပ်ဆင့်အလွမ်းနှင့် ရင်တွင်းဖွဲ့ဝေဒနာ
(၆) အသည်းနှလုံး၏ ကြေငြာစာတမ်း
(၈) သစ္စာတိုင်ရတုကို သံပြိုင်သီဆိုခဲ့ပါလျှက်
(၁၀) မုသားဖြင့် ချော့မြူသောနှုတ်ခမ်း
(၁၁) လူ့ပြည်က အပ်နှစ်စင်း
(၁၂) သင်နှင့်မသက်ဆိုင်တော့သည် မနက်ဖြန်၏....
(၁၃) အလွမ်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်
(၂.၈.၂၀၁၃) တွင် ငသစ်ထပ်ဖြည့်တင်ပေးထားသော စာအုပ်များ
(၁၅) မနာတတ်တဲ့ အသည်း
(၁၆) သယောဇဉ် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
(၁၇) အသည်းနှလုံး၏ ဘယ်လက်ရုံး
(၁၈) ပြန်လည်နိုးထစေလိုသော အချစ်၏မျက်နှာ
(၁၉) အညာသွေး ရန်ကုန်သား
(၂၀) နှလုံးသား၏ နောက်ဆုံးထုတ် ပုံဏ္ဍာန်အသစ်
(၂၂) အလွမ်းဖြင့်သီကုံးသည် နှလုံးသား၏ကျောက်စာဟောင်း
လုလုမောင် ဆီမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by ပြည့်ကျော် at 17.9.13 No comments:
Nin Sate Tine Kya
Myin Naing Ma Lar
Sate Tay Lay
Mae Pyit Lite
Gaung Nae Pan
Ah Nar Toe Par
Kant Thet Mhu
Min Ah Twet Nae Ah Lote Shote Nay Tae Ngar
Mae Lite Par Tot
Bar Pyit Pyit
Posted by ပြည့်ကျော် at 20.8.13 No comments:
တစ်ယောက်တစ်နေရာမှ Lyrics အား လောလောဆယ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါရန် အဆင်ပြေတဲ့ဆီက ကူးယူဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ----
Michael Learn To Rock (CD album)
1. Michael Learns To Rock - Time For Changes.mp3 (9.82mb) download
2. Michael Learns To Rock - Animals.mp3 (12.48mb) download
3. Michael Learns To Rock - Romantic Balcony.mp3 (12.82mb) download
4. Michael Learns To Rock - Paint My Love.mp3 (9.63mb) download
5. Michael Learns To Rock - Wild Women.mp3 (9.80mb) download
6. Michael Learns To Rock - Love Will Never Lie.mp3 (9.01mb) download
7. Michael Learns To Rock - I Still Carry On.mp3 (11.59mb) download
8. Michael Learns To Rock - Out Of The Blue.mp3 (10.02mb) download
9. Michael Learns To Rock - 25 Minutes.mp3 (10.96mb) download
10. Michael Learns To Rock - Breaking The Rules.mp3 (10.95mb) download
11. Michael Learns To Rock - How Many Hours.mp3 (11.87mb) download
12. Michael Learns To Rock - Crazy Dream.mp3 (10.08mb) download
13. Michael Learns To Rock - Nothing To Loose.mp3 (9.96mb) download
14. Michael Learns To Rock - Magic.mp3 (10.41mb) download
15. Michael Learns To Rock - Everything I Planned.mp3 (10.21mb) download
16. Michael Learns To Rock - Party.mp3 (11.47mb) download
17. Michael Learns To Rock - Every Day.mp3 (8.55mb) download
18. Michael Learns To Rock - A Different Song.mp3 (10.79mb) download
Blue Night album တစ်ခုလုံး ဒေါင်းရန် ဒီနေရာ
Romanson Milestone 13 [VA]
Romanson Milestone 13 [VA] Mediafire Download Link
Romanson Milestone 13 [VA] Dropbox Download Link
Posted by ပြည့်ကျော် at 7.8.13 No comments:
တစ်ယောက်တစ်နေရာမှ - WAnted (CD)
Wanted-တစ်ယောက်တစ်နေရာမှ[ CD ] Mediafire Download Link
Wanted-တစ်ယောက်တစ်နေရာမှ[CD ] Dropbox Download Link
အစိုင်း(BlackHole)- သစ္စာ [CD ] Dropbox တွင် ဆွဲရန်
အစိုင်း(BlackHole)- သစ္စာ [CD ] Mediafire တွင်ဆွဲရန်
မိမိနှစ်သက်ရာလင့်မှ ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။ မူရင်းလင့်လေးလဲ ထည့်ထားပေးပါတယ်နော်
သယ်ရင်းတို့အားလုံးပဲ သောတအသစ်တွေနဲ့ စိတ်တွေပါ လတ်ဆတ်သစ်လွင်နိုင်ကြပါစေ
Mediafire တွင် Album တစ်ခုလုံးဒေါင်းယူပါ
BOX ဒီနေရာမှာလဲ ဒေါင်းနိုင်ပါသည်
Credit to : Myanmar Playlists
Myanmar Mp3 Album မှ ကူးယူဖော်ပြပေးပါတယ်
Posted by ပြည့်ကျော် at 23.7.13 1 comment:
Credit – MAMC Streaming Player & One Click Download Links Here
အစိမ်းရောင်စာစု-Drive [CD] Download Here [ Mediafire Download Link ]
အစိမ်းရောင်စာစု-Drive [CD] Download Here [ Dropbox download Link ]
ကျနော် အကြိုက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့ မနက်ခင်းအသစ်ပါ--- သူငယ်ချင်းတို့ကော-------
Posted by ပြည့်ကျော် at 23.7.13 No comments:
ဖုန်းမှာဆက်သွယ်ရေး MPT နာမည်ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်လေးထည့်မယ်(For Root User)
မြန်မာလိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် Root Explorer ထဲကိုဝင် Root Access တောင်းရင်ပေးလိုက်နော်
အဲဒီမှာ Mount R/W ဖြစ်နေရင် R/O ပေးလိုက်ပါ . . .
spn-conf.xml ကိုတွေ့အောင်ရှာ၊ တွေ့ပြီဆိုရင် အဲဒီပေါ်ကိုဖိထားလိုက်ပါ ဒါဆိုဘောက်တစ်ခုပွင့်လာမယ် အဲဒီမှာ Open in Text Editor ကိုရွေးလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ခုနက New Operator Name နေရာမှာအစားထိုးခဲ့တဲ့ နာမည်လေးပေါ်နေမယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာလိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ အဲဒီကောင်လေးကိုဖျက်ပြီး မြန်မာလိုအစားပြန်ရေးလိုက် ကိုယ်ကြိုက်သလိုပေ့ါ ဒါပြီးရင်တော့ Menu key နှိပ်ပြီး Save & Exit နှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Reboot or Restart လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုပြန်တက်လာရင် ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့မြန်မာလိုဟာလေးနဲ့ MPT နေရာမှာ ပေါ်လာပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းမောသွားပါပြီ . . . အဆင်ပြေကြပါစေ . . အဆင်မပြေရင် အော်ခဲ့နော် . . . အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ဦးနော်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး) မှ ကူးယူလာပါတယ်
Posted by ပြည့်ကျော် at 4.7.13 No comments:
Labels: နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်
Maubin, ayeyawady, Myanmar (Burma)
ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်တတ်တဲ့ အရမ်းလွမ်းတတ်တဲ့ ခံစားတတ်လွယ်တဲ့ကောင်လေး
မေးလ်ထားခဲ့ပေးပါက အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါမည်။
အကောင်းဆုံး English စာသင်
မြန်မာ Moblie Application
The Bloom Fashion
မြန်မာ e-book များဒေါင်းရန်
မောင်လှမျိုး (ချင်းချောင်းခြံ)၏ ၀တ္ထုစာအုပ်များးးးး...
ချစ်သူ့နှုတ်ခမ်းအား ချစ်သူ၏ အားအင်တို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်. Watermark theme. Powered by Blogger.